Isimo sezulu sabantu abasuswe ezindaweni zabo siyanda | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isimo sezulu sabantu abasuswe ezindaweni zabo siyanda
Njengoba sazi kwezinye izikhathi, UDonald Trump uyakwenqaba ukuba khona kokuguquka kwesimo sezulu yize ubufakazi bucacile futhi buqhubeka njalo. Ngenxa yokwanda kwesimo sezulu esibi kakhulu, kunabantu okumele badluliselwe kwezinye izindawo eziphephile. Lezi yizinto ezibizwa ngokuthi "isimo sezulu esibalekile".
Yebo, iTropical Storm Cindy iphinde yakhumbuza izakhamuzi zaseMississippi Delta kuleli sonto ukuthi zingaba ngabokuqala ukulethwa yizimo zezulu. Naphezu kwakho konke lokhu, kusenabantu abaphika ukuthi kukhona ukufudumala komhlaba. Ungakuphika kanjani okusobala?
1 Isiphepho esishisayo
2 Ngokuya ezindaweni eziphephile
3 Ukuguquka kwesimo sezulu nokungabaza
IGrand Isle itholakala eMisissippi Delta futhi ishayiwe esinye seziphepho zokuqala ezinkulu zesizini sesiphepho okuqala manje ngokunyuka kwamazinga okushisa. Ukukhuphuka okuqhubekayo kwamazinga okushisa kubangela inani elikhulu lamanzi olwandle ukuba liphele, kubangele ukwakheka kwamafu amakhulu wohlobo lwe-cumulonimbus. Ngaphezu kwalokho, ukungazinzi komkhathi kanye nokwehla kwengcindezi yikhona okwenza kube neziphepho.
UDavid Carmadelle, imeya yaseGrand Isle, uxwayise ngokuthi amagagasi kaSindy antshontshe amamitha ayi-10 esiqhingini esingaphezu kwekhilomitha ububanzi nokuthi ukulahleka komhlaba ingeza kumamitha angama-50 atholwe ulwandle ezivunguvungwini zokugcina ezahlasela leli dolobha. Lokhu kungahunyushwa njengokubalwa phansi noma njengesixwayiso ngemiphumela eseduze yokuguquka kwesimo sezulu olwandle.
Kukhona namanye amacala anjengeShishmaref, e-Alaska, noma i-Isle de Jean Charles, idolobha eliseBayou of Louisiana kusukela ngawo-60 ibone indawo yayo engama-98% icwile ngaphansi kwamanzi. Ngemuva kweziphepho ulwandle lukhuphuka futhi balahlekelwa ugu. Ngokusobala, bonke abantu abahlala kulezi zindawo kufanele basuke kulezi zindawo baye kwezinye eziphephe kakhudlwana. Ngenxa yalesi sizathu, babizwa ngokuthi "isimo sezulu sisusiwe".
Ngehlobo eledlule eShishmaref izakhamizi ezingaba ngu-500 kwadingeka zishiye lesi siqhingi ngemva kweminyaka engaba ngu-400 zinikezelwe ukudoba. Ngenxa yokufudumala kwembulunga yonke, iqhwa lase-Arctic abathembele kulo uma bedoba lihlala kancane. Lokhu kunikeza indlela yokuqhubekisela phambili ukuguguleka kwemingcele.
Ngokuya ezindaweni eziphephile
Ukuze uthuthele ezindaweni eziphephile futhi ungabi izisulu zezimo zezulu ezimbi njengeziphepho, izindawo zidinga ukuthola imali kohulumeni. U-Isle de Jean Charles ubengomunye wabokuqala ukuthola imali ngokuthinteka emiphumeleni yokufudumala komhlaba. Ngale mali, abantu bazokwazi ukuthuthela ezindaweni eziphephile.
Imali inikelwe ngo-2016 ngesikhathi sikaHulumeni kaBarack Obama futhi inenani lamadola ayizigidi ezingama-52. Ngale mali kuhloswe ngayo ukwakha uhlobo lokufudukela emadolobheni olusebenzayo ukuze izakhamuzi zedolobha zigcine ukusondelana kwazo zingalahlekelwa izimpande noma ubunikazi bazo. Imindeni eminingi eseqalile ukwenza amacebo okushiya amakhaya ayo ngenxa yokwenyuka kwamazinga olwandle iyisiqalo sokuqala sabantu abasuswe dengwane ngesimo sezulu, esinganda eminyakeni ezayo nasemashumini eminyaka e-United States nakuyo yonke iplanethi. .
Ngakolunye uhlangothi, INew York City nayo icele izimali ezifanayo ibona ukuthi ikusasa lapho izinga lolwandle likhuphuka selivele liseduze. Ukuphendula lokhu kukhuphuka kolwandle, kufanele bathuthele phakathi nezwe.
Ukuguquka kwesimo sezulu nokungabaza
Yize ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta abantu baseMelika abaningi, UMongameli uDonald Trump uyakuphika ukuthi kukhona ushintsho esimweni sezulu. Kuyihlazo ukuthi umuntu onamandla amakhulu aphike into esobala futhi, ngenxa yalokho, izigidi zabantu zizohlupheka, ingasaphathwa eyokuphilayo kanye nemvelo.
UTrump uthathe isinqumo kule nyanga ukususa i-United States, ukukhipha okwesibili ngobukhulu kwamagesi abamba ukushisa emhlabeni ngemuva kweChina, weSivumelwano Samazwe Ngamazwe SaseParis sokunciphisa ukungcola, into ephakamisa ukukhathazeka kwemiphakathi evezwe kakhulu kumthelela wokushisa komhlaba.
UBill Walker, uMbusi wase-Alaska, uzisole ngesinqumo sikaTrump njengoba kunemiphakathi egwinywa ngokoqobo ngamanzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Isimo sezulu sabantu abasuswe ezindaweni zabo siyanda
Kubhalwa okungenani ubuncane bomlando weqhwa olwandle lwase-Antarctic
Intwasahlobo yowezi-2017 ibe yimfudumalo emarekhodi